Aar Maanta - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 14 Janaayo, 2013, 12:15 GMT 15:15 SGA
Fanaanka caanka ee Aar Maanta ayaa wareysi dheer oo uu siiyay BBC uga warramay taariikhda fankiisa iyo heesaha uu qaado. Aar Maanta oo deggan waddankan Britain waxa uu qaadaa heesoo isugu jira waddani iyo jaceyl.
Aar Maanta waxa uu qaadaa heeso waddani iyo jacayl isugu jira
Fanaanka caanka ee Aar Maanta ayaa wareysi dheer oo uu siiyay BBC uga warramay taariikhda fankiisa iyo heesaha uu qaado.
Aar Maanta oo deggan waddankan Britain waxa uu qaadaa heesoo isugu jira waddani iyo jaceyl.
Waxaa heesihiisa qaar uu ku qaadaa luqadda Af-Ingriisiga.
Heesaha fanaanka waxa aad u jecel dhalinyarada Soomaaliyeed.